Ngo-2003, UP Group-Shanghai UPG International yasekwa ngamashishini aphambili owayesakuba yi-Ofisi yoMphathiswa kushishino oomatshini kwiRiphabliki yabantu China, uye iqela yorhwebo langaphandle abasebenzi abangaphezu kwama-40. Yinkampani yorhwebo lwangaphandle yobungcali yeqela le-UP elijolise kushishino lokuthumela ngaphandle lokushicilela kunye nokupakisha, oomatshini beplastiki kunye nezinto ezinokusetyenziswa ezinxulumene noko, njl. Okwangoku, inkampani iseke ubudlelwane bokuzinza kunye nokuhlala ixesha elide kunye neearhente kumazwe angaphezu kwama-40. Iimveliso zethu zigubungela amazwe angaphezu kwama-80 kumazwekazi angama-6 ehlabathi kunye nokuthumela kumazwe angaphezulu kwama-50 ngonyaka.
Sithatha itekhnoloji kunye nomgangatho njengesiseko kunye nokuhlangabezana neemfuno zabathengi njengenjongo yolawulo lwenzululwazi kunye nokuqhubeka okuqhubekayo okuhlanganisa uphando lwezenzululwazi kunye nophuhliso, ukuvelisa kunye nentengiso yorhwebo lwangaphandle ukubonelela ngezisombululo zokuma kunye nenkxaso yobuchwephesha bokushicilela nokupakisha phesheya, irabha kunye nomzi mveliso weplastikhi abathengi.
Ukushicilela kukaJiangyin Huitong kunye noMatshini wokuPakisha, Ltd., ilungu leqela le-UP, yinkokeli yokushicilela oomatshini bokushicilela basekhaya kwimveliso yoshicilelo, umatshini wokukhusela, umatshini wokuhlola, ukuqhekeza kunye nomatshini wokubuyisela umva, umatshini wokwenza iplastikhi, Umatshini wokutyabeka., njl.njl.Okukho kuphela ukugubungela imveliso enkulu kunye nesabelo sentengiso e-China kodwa kunye nenani elonyukayo lokuthumela ngaphandle minyaka le, inegama elihle lomsebenzisi kunye nethemba lophuhliso lwemveliso. Ukongeza, inkampani iseke ubuhlakani bexesha elide kunye namashishini angaphezu kwe-10 anamandla e-China. Uluhlu lwemveliso ebanzi kunye nokudityaniswa kwemizi-mveliso kunokubonelela ngeendlela ezininzi kubathengi baphesheya.
Siyathemba ukuba abathengi bamanye amazwe bazakufikelela kuthi kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukubonelela ngeemveliso ezinokuthenjwa kunye nenkonzo ekumgangatho ophezulu ukuhlangabezana neemfuno zabathengi